YEYINTNGE(CANADA): Monday, May 27
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 5/27/20130အကြံပြုခြင်း
နိုင်ငံကူးလက်မှတ် သက်တမ်းတိုး တကိုယ်တော် ဆန္ဒ ထုတ်ဖေါ်တောင်းဆိုခြင်း အစီအစဉ်
လာမည့် ဇွန်လဆိုလျှင် နိုင်ငံသား တဦးဖြစ်သည့် ကျနော် နိုင်ငံကူးလက်မှတ် သက်တမ်းတိုး လျောက်ထားခဲ့သည်မှာ ( ၁) နှစ် ပြည့်တော့မည်ဖြစ်ပါသည်။ သတင်းစာ ဂျာနယ်များတွင် သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများက တစ်ပတ် အတွင်း နိုင်ငံကူး လက်မှတ်များ ထုတ်ပေးနေပါကြောင်းနှင့် မည်သည့် အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်စေ ကြန့်ကြာမှုများမဖြစ်ပေါ်ရန် စနစ်တကျ ဆောင်ရွက်နေကြောင်း စာလုံးကြီးခေါင်းစီးများဖြင့် ဆက်တိုက် ဆိုသလို ဖေါ်ပြနေကြပါသည်။
သို့ပေသော်လည်း ကျနော့်မှာတော့ ပတ်စ်ပို့ ရရှိဖို့ အရေး နိုင်ငံကူး လက်မှတ် သက်တမ်းတိုးမြင့်ခွင့် ရရှိဖို့ အရေး တနှစ်တာပတ်လုံး သည်းခံပြီး စောင့်ဆိုင်းခဲ့ပါသည်။ မနေ့က အထိ ဖုန်းဆက်သွယ် မေးမြန်းပါသည်။ ကျနော့် နိုင်ငံကူး လက်မှတ် သက်တမ်းတိုးခွင့်ရရှိရေး အတွက် အထက်သို့ တင်ပြ ထားပါသည် ဟု သာပြန်ကြားပါသည်။ မည်သည့် အထက် ဟုကား မသိပါ။
ဘာ ဥပဒေ ၊ ဘယ်လို ပုဒ်မတွေနဲ့ ညိစွန်းနေသဖြင့် မိမိကဲ့သို့ သော သာမန် နိုင်ငံသားတဦးကို ပတ်စပို့ အဘယ်ကြောင့် ထုတ် မပေးခြင်း ဖြစ်ပါသလဲ ဟု တာဝန်ရှိသော ရဲမှူးကြီးကို မေးမြန်းသော အခါ မည်သို့မျှ ဖြေကြားခြင်း မရှိခဲ့ပါ။
ကနေဒါ နှင့် အမေရိကန်မှ လူမှုဘ၀ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဆောင်ရွက်လိုသူ မြန်မာ့မိတ်ဆွေများက အလည်ဖိတ်ခေါ်ပြီး ကျေးလက် လူတန်းစား အများစု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် လက်တွဲဆောင်ရွက်ရန် ဆွေးနွေးစည်းဝေးခြင်းများ ပြုလုပ်မည်ဖြစ်သောကြောင့် ကျနော့်အား ဖိတ်ကြားသည်။ ကျနော့်တွင် နိုင်ငံကူး လက်မှတ် မရှိ။
သို့နှင့် မိမိမှာ အခြား ရွေးချယ်စရာ လမ်းမရှိဖြစ်နေရပါသည်။
နောက်ဆုံး အနေဖြင့် အကြောင်းပြချက် ခိုင်လုံစွာ ဖေါ်ပြနိုင်ခြင်း မရှိ၊ အခြေခံ ဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက် များမှ ငြိစွန်းသော ပုဒ်မ အချက်အလက် အထောက်အထား ခိုင်မာစွာပြဆိုနိုင်ခြင်း မရှိပဲ သော်လည်းကောင်း၊ မိမိတို့ကဲ့သို့သော နိုင်ငံသား တဦးအား အကြောင်းပြချက် မပေးပဲ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ထုတ်ပေးခြင်း မပြုသည့် ကိစ္စအတွက် ၊ ဆုံးရှုံးနေသော နိုင်ငံသား အခွင့်အရေး အတွက် သော်လည်းကောင်း ရန်ကုန်မြို့ နိုင်ငံကူး လက်မှတ် ထုတ်ပေးရေး ရုံး အရှေ့တွင် တရားဝင် တကိုယ်တော် ဆန္ဒ ထုတ်ဖေါ်တောင်းဆိုရန် ကြိုးစားခြင်း အခွင့်အလမ်း တခုသာ ကျန်ရှိပါတော့ကြောင်း စဉ်းစားမိပါသည်။
ယခု ရက်ပိုင်းအတွင်း တာဝန်ရှိသူများဧ။် စေတနာထား တုန့်ပြန်မှုကို စောင့်ကြည့်ပြီး တကိုယ်တော် ဆန္ဒ ထုတ်ဖေါ်တောင်းဆိုခြင်း အစီအစဉ်ကို လုပ်သင့် မသင့် ဆုံးဖြတ်မည် ဖြစ်ပါသည်။
နိုင်ငံသားတဦးအတွက် အခြေခံ ဥပဒေ ပြဌာန်းချက်များပါ နိုင်ငံသား အခွင့်အရေးကို အကြောင်းပြချက် မရှိပဲ ဖယ်ရှားဖိနှိပ်သည်ဟု ယုံကြည်နိုင်လောက်သော အကြောင်းများ ရှိသည်ဆိုပါက ဆန္ဒ ထုတ်ဖေါ်တောင်းဆိုရန် ရက်စွဲ သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ရဲစခန်းတွင် လျောက်ထားမှုများကို တရားဝင်ကြေငြာကာ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 5/27/2013 1 အကြံပြုခြင်း
Grate4to 8 တက်ထားတဲ့အထောက်အထားပူးတွဲပြီးလျောက်ထားရမှာ
ခေတ်နဲ့အညီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု လုပ်ဆောင်သွားဖို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောကြား
ပြည်သူလူထုနဲ့ နိုင်ငံအတွက် ခေတ်နဲ့ အညီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ လိုအပ်တာတွေကို NLD ပါတီအနေနဲ့ အဓိကထားလုပ်ဆောင်သွားမယ့်အပြင် ပါတီတွင်းမှာလည်း ခေတ်နဲ့လျော်ညီအောင် ပြုပြင်ပြောင်း လဲဖို့ လိုအပ်တာတွေကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမယ် လို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောကြားလိုက် ပါတယ်။
ခေတ်မီတဲ့ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ဖို့ဆိုရင် အဖွဲ့ချုပ်ဝင်တွေလည်း တစ်ဦးချင်း ခေတ်နဲ့အညီ စတင်ပြုပြင်ဖို့လိုတယ်လို့ အန်အယ်လ်ဒီပါတီရဲ့ ပထမအကြိမ် ဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးမှာ ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောကြားခဲ့တာပါ။
ဒါ့အပြင် အန်အယ်လ်ဒီပါတီ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ညီလာခံမကျင်းပခင်မှာ ကြိုးစားခဲ့ကြတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာ ရွေးကောက်ခံရပြီးနောက် တာဝန်ယူမှု အားနည်းလာတာတွေကိုလည်း တွေ့ရှိရတာကြောင့် ဆင်ခြင်ဖို့လိုတယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သတိပေးပြောကြားခဲ့ ပါတယ်။
ဒီနေ့ကျင်းပတဲ့ ပထမဆုံးအကြိမ် အန်အယ်လ်ဒီ ဗဟိုကော်မတီ အစည်းအဝေးမှာ တိုင်းနဲ့ ပြည်နယ်အသီးသီးက ကော်မတီဝင်တွေရဲ့ အကြံပြုစာတွေကိုလည်း ဆွေးနွေးကြပြီး ဗဟိုကော်မတီဝင် ၁၀၆ ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
နေပြည်တော်ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ မေလ ၂၆ ရက်
ချင်းတွင်းတံတား မှာ စက်ဘီးသမားပါအဆစ်ပါ
Unlucky biker from Burma(Myanmar)
Biker got double force while trying to stop motorcycle for entry free .
ဂိတ်ကြေးမပေးတဲ့ ဆိုင်ကယ်ကို ရိုင်းစိုင်းစွာခုလို
နေပြည်တော်၊ မေ- ၂၆
၂၀၁၃ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇ ရက်မှ ယနေ့အထိ နေပြည်တော် ရှစ်မြို့နယ်အတွင်း သွေးလွန်တုပ်ကွေး ဖြစ်ပွားမှုအရေအတွက်မှာ ၁၇၂ဦးရှိပြီး တစ်ဦးသေဆုံးခဲ့သည်။
ထို့အပြင် ဆေးရုံသို့ရောက်မလာသောသွေး လွန်တုပ်ကွေးလူနာများလည်းရှိနိုင်သည်။ အဆိုပါ ဦးရေထဲမှ ယခုလအတွင်း ၄၀ ဦးခန့်ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ “၄၀ ကျော်လောက်ဖြစ်လာပြီဆိုတော့ အရေးပေါ်လို့ပဲ သတ်မှတ်ရမှာပေ့ါ” ဟု
သုံးလအတွင်း နေပြည်တော်ရှစ်မြို့နယ်အတွင်း သွေးလွန်တုပ်ကွေးဖြစ်ပွားမှုမှာ တပ်ကုန်းမြို့နယ်တွင် ၅၉ ဦးရှိကာ အများဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့ ခြင်းဖြစ်သည်။ ဆက်စပ်လျက်ရှိသည့် ပုဗသီရိမြို့နယ်တွင် ၅၆ ဦး၊ ပျဉ်းမနားမြို့ နယ်တွင် ၂၃ဦး၊ လယ်ဝေးမြို့နယ် တွင် ၁၉ဦး၊ ဇေယျာသီရိမြို့နယ်တွင် ၁၁ ဦး၊ ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ်တွင် သုံးဦး၊ ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်တွင်တစ်ဦးဖြစ်ပွားခဲ့ကာ ဇဗူသီရိမြို့နယ်တွင်မူ ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းမရှိပေ။
မိုးရွာသွန်းလာ၍ ခြင်ပေါက်ဖွားရာသီရောက်သည့်အပြင် ကျောင်းဖွင့်ချိန်လည်း ရောက်ရှိတော့မည်ဖြစ်၍ သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ ကာကွယ်၊ ကုသ၊ နှိမ်နင်းရေးလုပ်ငန်းများအရှိန်အဟုန်မြင့် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး ရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်ခြေအများဆုံးဖြစ်သော ဆေးရုံ၊ စာသင်ကျောင်း ပတ်ဝန်းကျင်များကိုဦးစားပေးနှိမ်နင်းကာကွယ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကဆက်လက်ပြောကြားသည်။
ထို့အပြင် အဆိုပါရောဂါ ကာကွယ်၊ ကုသ၊ နှိမ်နင်းရေးအတွက် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများကို သင် တန်းများစတင်ပို့ချလျက်ရှိပြီး ပြည်သူလူထုကိုလည်း ပညာပေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။ “ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင် လိုက်နာလုပ် ဆောင်ဖို့က ပိုအရေးကြီးတယ်။ အထူးသဖြင့် ဖုံး၊ သွန်၊ လဲ၊ စစ် ဒါက ကာကွယ်ရေးမှာ အရေးအကြီးဆုံးပဲ”ဟူ၍လည်း၎င်းက ပြည်သူကို ရည်ရွယ်ပြီးပြောကြားသည်။
လက်ရှိအခြေအနေအရ သေဆုံးသူတစ်ဦးသာရှိသေး၍ နည်းသည်ဆိုသော်လည်း မသိလိုက်သည်များရှိနိုင်ပြီး ကလေးငယ်များ အသက်ရှင်သန်ရေးအတွက် ကုသခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲခြင်းများအရေးကြီးသည်။ ထို့ကြောင့် ဆေးရုံများတွင် ဆေးဝါးများပြည့်စုံစွာထားရှိပေးထားပြီး ချက်ချင်း ဆောင်ရွက်ရန် အရေးကြီးကြောင်းလည်း ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)၊ ဒုတိယညွန်ကြားရေးမှူး ချုပ် ဒေါက်တာစိုးလွင်ငြိမ်းကပြောကြားသည်။
ဒါဟာ လက်ငင်း ဖြစ်လာတဲ့ အနာမဟုတ်ဘူး
တွေးမိသမျှ ဗြုပ်စဗျင်းတောင်း (၅)
1988 မှာမြန်မာက စလိုက်တဲ့ ဒီမိုကရေစီလှိုင်းဟာ အရှေ.ဥရောပ ကွန်မြူနစ် နိုင်ငံတွေ အားလုံးလိုလို ပြိုလဲကုန်တယ် ။ ဆိုဗီယက်က သူ့ပြည်နယ်တွေကို ဖက်ဒရယ် ဖွဲ.စည်းပုံ အရ နိုင်ငံတွေ ခွဲပေးခဲ့ရပြီး ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတွေပေါ်ထွန်းလာခဲ့တယ် ။
တောင်အမေရိက တိုက်က နိုင်ငံတွေလည်း ဒီမိုကရေစီ လှိုင်းဒဏ် မခံနိုင်ဘဲ ဒီမိုကရေစီ တိုက်ပွဲတွေနဲ့ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေ ဖြစ်လာကြတယ် ။ ဘာလင်တံတိုင်းကို ဖြိုပြီး အရှေ.ဂျာမဏီ အနောက်ဂျာမဏီ ပေါင်စည်းခဲ့တယ် ။ ဒီ ၁၉၉၀ ဒီမိုကရေစီလှိုင်းကို ကျွန်တော် အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက စတင်ရိုက်ခတ်တဲ့ လှိုင်းလို့ သတ်မှတ်ချင်တယ် ။
ဒိုမီနို သဘောတရားအရ ။ မွတ်ဆလင် လက်မခံရေး လှိုင်းကရော ရခိုင် ဘင်္ဂါလီ အရေး မိတ္ထီလာ အရေးကနေစတယ် လို့ ပြောမလား ။ ပွင့်လင်းလာတဲ့ မီဒီယာ နဲ့ ပြားနေတဲ့ ကမ္ဘာ.ရွာ မှာ နိုင်ငံတခုက အဖြစ်အပျက်ဟာ အခြားနိုင်ငံ တခုမှာ ချိန်ပိုင်းအတွင်းသိစေနိုင်ခဲ့ပြီ ။
မိတ္ထီလာ အဖြစ်အပျက်ကို ပြည်တွင်းမီဒီယာတွေကတောင် မဖော်ပြသင့်လို့ ယူဆပြီး ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ အကြောင်းအရာ မှတ်တမ်းတွေရှိတယ် ။ ဒါကို BBC က ရအောင်ယူပြီး ထုတ်လွင့်ပြသခဲ့တယ် ။ သူ့ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက် ဘာလဲဆိုတာတော့ မခန့်မှန်းနိုင်ပေမဲ့ ။
ဒီအကျိုးဆက်က သူ့နိုင်ငံကိုပါ ရိုက်ခတ်ခဲ့ပြီ ။ မိတ္ထီလာ သတင်းမှတ်တမ်းဟာ အခြားကမ္ဘာက မွတ်ဆလင် မုန်းတီးသူတွေကို မီးမွှေးပေးလိမ့်မယ် ဆိုတာ BBC အယ်ဂျာဇီးယားတို့ လို့ သတင်းမီဒီယာတွေ တွေးမိဟန်မတူဘူး ။
အာဖဂန်လို ဒေသမှာ အင်္ဂလိပ် စစ်သားတွေ သေနေကြတာကို အင်္ဂလိပ်တွေ အချိန်ပြည့် ဆန့်ကျင်နေကြပေမဲ့ ဒီနေ့လောက် လမ်းပေါ်ထွက်လာတာ မရှိဘူး။ ဟိုနား တအုပ်စု ဒီနားတအုပ်စုလောက်ပဲ ဆန္ဒပြနေခဲ့ကြတယ် ။
ဒါပေမဲ့ ဒီနေ့ အချိန်မှာ တော့ သာမာန် စစ်သားတယောက် အသတ်ခံရတဲ့ အတွက် မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင် လူတွေ လမ်းတွေပေါ် ထွက်လာကြတယ် ။ မွတ်ဆလင် ဆန့်ကျင်ရေးကို အတိအလင်း ထုတ်ဖော်လာကြပြီ ။ အဲ့ဒီအကျိုးဆက်ရဲ့ နောက်ဆက်တွဲက No Halal တို့ No Islam တို့ လာတော့မယ် ။ ဒါဟာ လက်ငင်း ဖြစ်လာတဲ့ အနာမဟုတ်ဘူး ။ တမြည့်မြည့် ပြည်တည် နေတဲ့ အနာဆိုတာ မီးမောင်း ထိုးပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ် ။
လူမျိုးပေါင်းစုံ (multiculturalism) အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ရေးဟာ မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး ။ ပြီးဆုံးသွားပြီလို့ ၊ ဗြိတိန် ဝန်ကြီးချုပ်အပါအဝင် ဥရောပဝန်ကြီးချုပ်တွေက ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်တွေက အတိအလင်း ကြေငြာ ပြီးသွားကြပြီ ။ ဒါပေမဲ့ မွတ်ဆလင် တွေရဲ့ ဥရောပကို
ပြောင်းရွှေ.နေထိုင်မှုတွေကို ဘယ်လို ကိုင်တွယ်ရမလဲဆိုတဲ့ လမ်းစကို ရှာမတွေ.ခဲ့ကြဘူး ။
အစ္စလာမ် ဘာသာကို မုန်းတီးမှုတွေ မဖြစ်အောင် အစ္စလာမ် အစွန်းရောက် ဆိုတဲ့ အသုံးကိုသာ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် သုံးခဲ့ကြတယ် ။ ဒီလို အစွန်းရောက်လို့ သုံးမှသာ ကျန် အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်တွေနဲ့ အစွန်းရောက်နဲ့ ကွဲကွဲပြားပြား မြင်ပြီး အစ္စလာမ် ဆန့်ကျင်ရေးတွေ
မဖြစ်နိုင်မှာ ။ သို့သော် လူတွေရဲ့ မသိစိတ် သိစိတ်တွေမှာတော့ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်တွေနဲ့ ရင်းနှီးမိတ်ဆွေ ဖြစ်ရမှာကို ကြောက်နေကြတယ် ။ ဟန်ဆောင် အပေါ်ယံလောက်ပဲ မိတ်ဖွဲ.ကြတယ် ။ ဒါဟာ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်တွေကိုယ်တိုင် ဖန်တီးခဲ့တဲ့
အကြောင်းတရားတွေပဲ ။ အစ္စလာမ် အစွန်းရောက်တဲ့ ကိစ္စတွေများလာတဲ့အခါ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်တွေ အားလုံးဟာ အတူတူတွေပဲ လို့ လူတွေ မြင်လာကြပြီ ။ အစ္စလာမ်ဘာသာ ဘက်ကနေ ကာကွယ်ပြောဆိုနေတာတွေကိုက အစ္စလာမ်ဘာသာကို ပိုမို မုန်းတီးစေရန်
အကြောင်းတရားတွေ ဖြစ်လာခဲ့ပြီ ။
အင်္ဂလန်မှာလည်း ၉၆၉ အယူအဆ ရှိတယ် ဆိုရင် ယုံကြမလား။ အင်္ဂလိပ်တွေဟာ မွတ်ဆလင် ဆိုင်တွေ နိုင်ငံခြားသားဆိုင်တွေက ဈေးဝယ်လေ့ မရှိပါဘူး ။ လုံးဝမဝယ် ၊ မစားတာမျိုးတော့ မဟုတ်ပါဘူး ။ အင်္ဂလန်မှာ နိုင်ငံခြားသားတွေ ဖွင့်ထားတဲ့ စူပါမားကက်တွေ ၊ စတိုးဆိုင်တွေ အမြောက်အများရှိပါတယ် ။ ဒီလို ကြားမှာ သူတို့ အင်္ဂလိပ်ဆိုင်က ဈေးကြီးရင် ကြီးပါစေ ။ သူတို့ အင်္ဂလိပ်တွေပိုင်တဲ့ Tesco , ASDA Sainbury's စူပါမားကက်တွေမှာပဲ ပိုအဝယ်များပါတယ် ။ လမ်းထောင့်တွေမှာ ဖွင့်ထားတဲ့ တူရကီ ကုန်စုံဆိုင်တွေ ။ အိန္ဒိယ ၊ အာဖရိက ကုန်စုံ ဆိုင်တွေမှာဆို သိပ်ဝယ်လေ့မရှိကြပါဘူး ။ ALDI လို ဂျာမာန်ပိုင် စူပါမားကက်ဆိုရင် အင်္ဂလိပ်ပိုင် စူပါမားကက်ထက် အလွန်ဈေးသက်သက်ပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ အင်္ဂလိပ်တွေ ဈေးဝယ်တာ သိပ်မတွေ.ရဘူး ။
ဒါဟာ မြန်မာနိုင်ငံက ၉၆၉ အယူအဆနဲ့ အတူတူပါပဲ ။ မနှောင့်ယှက်ဘူး ဒါပေမဲ့ အားမပေးဘူး ဆိုတဲ့ အယူအဆပါ ။
အင်္ဂလိပ်တွေက အင်္ဂလန်ဟာ ဘယ်တော့ မွတ်ဆလင် နိုင်ငံ မဖြစ်စေရဘူး ဆိုတဲ့ စကားတွေ ပြောလာပါပြီ ။ လူ့အခွင့်အရေးကို တန်ဘိုးထားတဲ့ ဆီဒင်လိုနိုင်ငံကတောင် မွတ်ဆလင် လူငယ်တွေဟာ သူတို့အနာဂတ်ကို သူတို့ ဖျက်ဆီးနေကြတယ်လို့ သတိပေးပြောလာပြီ ။ ပြင်သစ်သမ္မတ က အစ္စလာမ် စစ်သွေးကြွတွေကို တရားသော နည်းလမ်းနဲ့ အမြစ်ဖြတ်မယ်လို့ ပြောလာပြီ ။ ဒါဟာ အစ္စလာမ် ကမ္ဘာအတွက် အိမ်မက်ဆိုး စတင်ခြင်းပဲ ။ ဒီမိုကရေစီ ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်ကြောင့် ချင့်ချင့်ချိန်ချိန် ဘာသာရေးကိစ္စတွေကို ကိုင်တွယ်လေ့ ရှိတဲ့ နိုင်ငံတွေ အနေနဲ့ ဘယ်သူစမလဲ လို့ စောင့်နေကြတာဖြစ်တယ် ။ ဥရောပ မှာ အစဉ်အလာတခုရှိတယ် ။ ဘယ်သူအရင်စမလဲ ဆိုတဲ့ ကိစ္စပါ ။ တနိုင်ငံက စရင် ကျန်နိုင်ငံတွေက ငြိမ်မနေဘူး ။ နောက်ကလိုက်လေ့ရှိတယ် ။ တူနီးရှား စံပါယ်တော်လှန်ရေးကြောင့် အာရပ်ဒီမိုကရေစီလှိုင်းက သီသီလေးလွတ်ခဲ့ရတဲ့ ထမင်းလုံးတစ္ဆေအခြောက်ခံခဲ့ရတဲ့ အာရပ်ကမ္ဘာ ဒီတခါ anti muslim လှိုင်းကိုရော ဘယ်လို ကာကွယ်ကြမလဲဆိုတာ ပွဲကြီးပွဲကောင်းအဖြစ် စောင့်ကြည့်ရပါလိမ့်မယ် ။
Butterfly effect လို့ခေါ်တဲ့ chaos ဖြစ်စဉ် သီအိုရီ တခုရှိပါတယ် ။
The flap ofabutterfly’s wings in Brazil set offatornado in Texas
ဘရာဇီးက လိပ်ပြာတကောင် တောင်ပဲခတ်မှုကြောင့် အမေရိကန်နိုင်ငံက တက်ဆက်ပြည်နယ်မှာ လေဆင်နှာမောင်း ကို ဖြစ်ပေါ်စေတယ် တဲ့။ ဆိုလိုရင်းက ဒီလိုပါ ။ ဘရာဇီးက လိပ်ပြာတောင်ပံ ခတ်လိုက်လို့ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ လေလှိုင်း အသေးလေးတွေက အခြားလေလှိုင်းတွေ နဲ့ ပေါင်းစပ် ၊ ဒီလို ဆင့်ကဲ လေလှိုင်းတွေ ပေါင်းစပ်ရင်း နဲ့ လေလှိုင်းဟာ အချိန်ကြာတော့ ကြီးလာပြီး လေဆင်နှာမောင်း အသွင်ကို ကူးပြောင်းသွားနိုင်တာကို ဥပမာပေးထားတဲ့ သီအိုရီပါ။
ဒီဖြစ်စဉ်လိုပဲ ပြဿနာအသေးလေးတွေလို့ ယူဆထားတဲ့ အစ္စလာမ် ဘာသာရဲ့ အခြားဘာသာတွေနဲ့ ဖြစ်တဲ့ ပြဿနာတွေဟာ ဒီအချိန်မှာ အရှိန်ကောင်းတဲ့ လှိုင်းတခု ဖြစ်တည်ဖို့ အားပြုနေပါပြီ ။ မကြာမှီကာလမှာ သမိုင်းဝင်တော့မဲ့ တရားသော ဘာသာရေး
စစ်ပွဲတွေပေါ်ပေါက်လာနိုင်ခြေ အနေအထားကို မြင်နေရပြီ ။
တကယ်တော့ ဒီပြဿနာ အကယ့် အရင်းအမြစ်က အာရပ်ကမ္ဘာက အာဏာရှင်တွေမှာ အရင်းခံနေပါတယ် ။ အာရပ်ကမ္ဘာက အာဏာရှင်တွေဟာ သူတို့ အာဏာ ရေရှည် ဆုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကို မွေးပြီး ဘာသာရေးကိုမှိုင်းတိုက်ပြီး အာဏာကို ဆုပ်ကိုင်ထားချင်ကြတဲ့ အာရပ်က အာဏာရှင်တွေရဲ့ လုပ်ရပ်ကြောင့် မွတ်ဆလင် ကမ္ဘာဟာ အခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင် လူတောမတိုးတဲ့ အဖြစ်တွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရတော့မယ် ။ ဒီတခါတော့ အာရပ်ကမ္ဘာက ဘုရင်တွေ စော်ဘွားတွေ အာဏာရှင်တွေရဲ့ နောက်ဆုံးနေ့ရက်တွေကို ဘယ်လို အဆုံးသတ်ကြမလဲ ၊ သို့မဟုတ် အာဏာရှင်ဟာ ကမ္ဘာတည်သရွေ. ရှိနေမှာလား ဆိုတဲ့ မေးခွန်းအတွက် အဖြေကိုတော့ အချိန်ကသာ ဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ် ။
Ko Kyi Win's photo.
အင်္ဂလန်မှာ အင်္ဂလိပ်စစ်သား Drummer Lee Rigby ကို နေ့ခင်းကြောင်တောင်လူမြင်ကွင်းမှာ ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းတဲ့ မွတ်ဆလင်အကြမ်းဖက်သမားနှစ်ယောက်က အလ္လာကဘာလို့ အော်ပြီး ခေါင်းဖြတ်သတ်လိုက်တော့ ဟောဒီလို လမ်းတွေအိမ်တွေမှာ အင်္ဂလန်အလံတွေ လွှင့်ထူပြီး အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်ပြကြတယ်။
အင်္ဂလိပ်တွေက Newcastle မှာ လူထောင်ပေါင်းများစွာ စုဝေးပြီးဆန္ဒပြကြတယ်။ ဒီနေ့ 27.05.2013 ညနေမှာ Downing street မှာ ဆန္ဒပြကြပါဦးမယ်။
facebook မှာ EDL English Defence League ကို ရက်ပိုင်းအတွင်း လူတစ်သိန်းကျော် Like လုပ်ပြီး အားပေးကြတယ်။
လူသတ်သမားတွေကို အင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေ facebook ကနေ တစ်ခဲနက် ရှုံ့ချကြတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရေးသမားများ၊ လူ့အခွင့်အရေးသမားများ၊ ပြည်ပက နိုင်ငံရေးလုပ်စားများ အားလုံးနှာစေးနေကြတယ်။
အိုိအိုင်စီအဖွဲ့ အင်္ဂလိပ်တွေကို ဘာမှ မပြောရဲပါ။
မိုးသီးဇွန်၊ ဇာနည်၊ ဝေနှင်းပွင့်သုန်၊ Burma campaign UK တို့ တေမိလုပ်နေကြတယ်။
(ဘ က တ အဖွဲ့)
ဂျပန်အစိုးရသည် နှစ်ပေါင်း ၂၆ နှစ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပထမဆုံးချေးငွေအကူအညီနှင့် ကြွေးကျန်ဒေါ်လာ ၁ ဒသမ ၇၄ ဘီလီယံအားပယ်ဖျက်ပေးပြီး နှစ်နိုင်ငံအကြား စီးပွားရေးဆက်ဆံမှုများကို အရှိန်မြှင့်လိုက်သည်။
ဂျပန်က မြန်မာသို့ ပေးသော ချေးငွေသဘောတူညီချက်ကို နေ ပြည်တော်တွင် သမ္မတဦးသိန်းစိန်နှင့် ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ် ရှင်ဇိုအာဘေး တို့တွေ့ဆုံအပြီး လက်မှတ်ရေးထိုး ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ စာချုပ်အရ ဂျပန်သည် မြန်မာသို့ ယန်းငွေ ၅၁ ဘီလီယံ (ဒေါ်လာ ၅၀၄ သန်း) ပေးအပ်ကူညီသွားမည်ဖြစ်သည်။
အတိုးနှုန်းသက်သာစွာ (၀.၀၁ အတိုးနှုန်း) ထုတ်ချေးသည့် ယင်းချေးငွေသဘောတူစာချုပ်ကို မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်သံအမတ်ကြီး မီကီယိုနူမာတာနှင့် မြန်မာဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုဝန်ကြီး ဒေါက်တာလင်းအောင်တို့က လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်ဟု ဂျပန်နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာန၏ ကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ထို့အပြင် ချေးငွေနှင့်အတူ မြန်မာက ရယူထားသည့် ကြေးကျန် ယန်း ၁၇၆ ဒသမ ၁ ဘီလီယံ (ဒေါ်လာ ၁ ဒသမ ၇၄ ဘီလီယံ)ကိုလည်း ပယ်ဖျက်ပေးခဲ့သည်။ ယင်းမှာ ဂျပန်က ပြီးခဲ့သည့် ဇန်န၀ါရီတွင် မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် တင်ရှိနေသည့် ကြွေးမြီယန်း ၃၂၆ ဒသမ ၃ ဘီလီယံ (ဒေါ်လာ ၃ ဒသမ ၅၈ ဘီလီယံ)ကို လျှော်ပစ်အပြီးတွင် နောက်ထပ် ကြွေးမြီ
ပမာဏ အများအပြားကို လျှော်ပစ်ခဲ့သည်။ ဂျပန်နိုင်ငံ၏ မြန်မာသို့ ယခုချေးငွေ ဒေါ်လာ ၅၀၄ သန်းမှာ
မူ ၁၉၈၇ မှစ၍ ပထမဆုံးအကြိမ်လည်းဖြစ်သည်။ ချေးငွေပေးအပ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဂျပန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ကြေညာချက်တွင် “ဂျပန်အစိုးရဟာ မြန်မာ့ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုတွေ တိုးတက်ရေးဆက်လက်ထောက်ခံပေးသွားဖို့ ဒီချေး ငွေတွေက အရေးကြီးတယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ အစိုးရဟာ မြန်မာနိုင်ငံကို ဆက်လက်ထောက်ပံ့အားပေးမှုတွေ လုပ်သွားမှာပါ”ဟု ဖော်ပြထားသည်။ တနင်္ဂနွေနေ့တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည့် စာချုပ်များအရ ယန်း
၁၇ ဘီလီယံ (ဒေါ်လာ ၁၆၈ သန်း) မှာ မြန်မာ့အခြေခံအဆောက်အအုံ တိုးတက်ရေးအတွက် သုံးစွဲရန် ယန်း ၁၄ ဘီလီယံ (ဒေါ်လာ ၁၃၈ သန်း) ကို လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရေး အတွက်သုံးရန်၊ ယန်း ၂၀ ဘီလီယံ ကို သီလ၀ါအထူးစီးပွားရေးဇုန်၌ စွမ်းအင်ဖြန့်ဝေရေး၊ ပို့လွှတ်ရေးနှင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးတို့အတွက် သုံးစွဲရန်ဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။ ဧကပေါင်း ၅၉၀၀ ကျယ်ဝန်းသော ရန်ကုန်မြို့အနီးရှိအဆိုပါသီလ၀ါအထူး စီးပွားရေးဇုန်မှာ ဂျပန်ကုန်သွယ်ရေး ကုမ္ပဏီကြီးများဖြစ်သော မစ်ဆူဘီရှီ ကော်ပိုရေးရှင်း၊ မာရူဘီနီကော်ပိုရေးရှင်းနှင့် ဆူမီတိုမိုကော်ပိုရေးရှင်းတို့က ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်မည့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဂျပန်၏ အကြီးဆုံးသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု
ဂျပန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ၏ ကြေညာချက်တွင် ချေးငွေများ၊ ထောက်ပံ့ရေးငွေများပေးအပ်ခြင်း နှင့် ပတ်သက်၍ “မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အကူဖြစ်ရေးနဲ့ မြန်မာနဲ့ ပူးတွဲလုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ ကြွေးကျန်ရှင်းလင်းရေးကိစ္စ တွေကို ဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့် ဂျပန်အစိုးရဟာ ယန်းနဲ့ပေးတဲ့ ချေးငွေအသစ်တွေကိုရော၊ ထောက်ပံ့ရေးအကူအညီ Grant Assistance တွေကိုပါ ပေးအပ်သွားဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်” ဟု ဖော်ပြထားသည်။
ဂျပန်အစိုးရသည် ယန်း၂ ဒသမ၄ ဘီလီယံ( ဒေါ်လာ ၂၃ သန်း တန်ဖိုးရှိသည့် ရန်ကုန်မြို့ ရေပေးဝေရေးစီမံခန့်ခွဲမှု အစီအစဉ်နှင့် နိုင်ငံ၏ လူငယ်အုပ်ချုပ်ရေးသမားများ တိုင်းပြည်၏စီးပွားရေးနှင့်လူမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုဆောင်ရွက် စီမံနိုင်အောင် ဖန်တီးပေးမည့် ပညာတော်သင်အစီအစဉ် တစ်ခုကိုလည်း ပေးအပ်ခဲ့သည်။ ဂျပန်၏ အကူအညီများ
နှင့် ပတ်သက်၍ မြန်မာ့စီးပွားရေး ကျွမ်းကျင်သူ သြစတြေးလျပညာရှင် ရှောင်တန်နယ်က “မြန်မာမှာ ဂျပန်ရဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဟာ တကယ်ကိုထူးခြားလှပါတယ်။ တော်တော်များများကို အံ့သြသွားစေလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော် ထင်ပါတယ်”ဟု မှတ်ချက်ပေးခဲ့ပြီး စီးပွားရေးသာမက ပထ၀ီနိုင်ငံရေးအရပါ မြန်မာနိုင်ငံသို့ဂျပန်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀င်ရောက်လာခြင်းသည် တရုတ်နှင့် ပြိုင်ဘက်ဖြစ်နေသည့် ၎င်းတို့ပေါ်လစီကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ်သည်။ ၎င်းက
ဂျပန်သည် မြန်မာတွင် သြဇာကြီးသည့် အဓိကနိုင်ငံတစ်ခု ဖြစ်လာနိုင်ကြောင်း၊ တရုတ်မှာမူ ၎င်း၏ အခြေခံ
အဆောက်အအုံဆိုင်ရာ စီမံကိန်းများတွင် လူမှုရေးနှင့် သဘာ၀၀န်းကျင်ဆိုင်ရာ ပြဿနာများကြောင့် စိုးရိမ်နေသော သက်ဆိုင်ရာပြည်သူများ၏ အတိုက်အခံပြုမှုများကို ရင်ဆိုင်လာရကြောင်း ဆိုသည်။ ၎င်းက “တရုတ်က ဘာမှမကြည့်ခဲ့ဘူးလို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ လူကြိုက်နည်းတဲ့ အခြေအနေထဲကနေ ရုန်းထွက်နေခဲ့ရတယ်။ အနောက်တိုင်းကတော့ စိတ်ဝင်စားကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ရဲ့ငွေတွေ အခုထိစားပွဲပေါ်မှာပဲ တလည်လည်ရှိနေပါသေး တယ်”ဟု ထောက်ပြပြောဆိုသည်။
မြန်မာသို့ နှစ်ပေါင်း ၃၆နှစ်အတွင်း ပထမဆုံးလာရောက်သည့် ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာခဲ့သည့် ရှင်ဇိုအာဘေးသည် ၎င်း၏ ခရီးစဉ်တွင် ဂျပန်ထိပ်သီးစီးပွားရေးကုမ္ပဏီကြီးများဖြစ်သော မစ်ဆူဘီရှီ၊ မာရူဘီ နှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီကြီးများဖြစ်သော တိုင်ဆိုင်းနှင့် ဂျေဂျီစီကဲ့သို့သော လုပ်ငန်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်တော် ၄၀ ခန့်ကို လည်းခေါ်ယူလာခဲ့သည်။ ဂျပန်သည် မြန်မာနှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များသာမက နှစ်ဖက်စစ် ဘက်ဆိုင်ရာအရာရှိများ အပြန်အလှန်လည်ပတ်ဆက်ဆံရေး၊ မြန်မာ စစ်တပ်အရာရှိများကို ဂျပန်တွင် လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးရေးစသည့် ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ ဆက်ဆံရေးများကိုလည်း အကောင်အထည် ဖော်သွားရန် ရှိနေကြောင်း ဝေါလ်စထရိသတင်းတစ်ရပ်ကလည်း ဖော်ပြခဲ့သည်။
“လုပ်ငန်းမူတည်ပြီးတော့ ယန်းငွေအနိမ့်ဆုံး တစ်သိန်းနှစ်သောင်းလောက်ရမယ်။ သူတို့ဆီမှာ နိုင်ငံခြားသားတွေရဲ့ အခကြေးငွေသတ်မှတ်ချက်အတိုင်းရမယ်။ သူတို့ ဘက်ကအလုပ်ရှာအုံးမှာပေါ့။ အလုပ်ခေါ်စာရမှ ဒီဘက်က လုပ်ငန်းစလို့ရမှာ။ သူတို့ဘက်ခေါ်ရင် ခေါ်သလောက်ခွင့်ပြုမှာ”ဟု အလုပ်သမား၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးမျိုးအောင်ကပြောသည်။
၀န်ဆောင်ခနှုန်းထားနှင့် ပတ်သက်၍ အတိအကျသတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိသေးကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ ထို့အပြင် ယခင်သွားရောက် လုပ်ကိုင်သော မြန်မာအလုပ်သမားများသည် သင်တန်းသားလုပ်သားအဖြစ် ဂျပန်နိုင်ငံရှိစက်ရုံများတွင်သွားရောက်လုပ်ကိုင်ခဲ့သော်လည်း သတ်မှတ်ထားသည့် လုပ်အားခအပြည့်အ၀ မရရှိခြင်းကြောင်းသတင်းရရှိသည်။ ထို့ကြောင့် တရားမ၀င်လုပ်သားအဖြစ် လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပြီးခေါင်းပုံဖြတ်ခံရမှုများ ရှိခဲ့ခြင်းကြောင့် မြန်မာအစိုးရဘက်မှ အလုပ်သမားစေလွှတ်မှုရပ်ဆိုင်းခဲ့သည်။
လက်ရှိဂျပန်နိုင်ငံတွင် မြန်မာအလုပ်သမားသောင်းဂဏန်းမျှရှိပြီး ပြည်ပအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်စီမှ တစ်ဆင့် သွားရောက်လုပ်ကိုင်ပါက ၀န်ဆောင်ခနှုန်းထားအဖြစ် ကျပ်ငွေသိန်း ၃၀နှင့်အထက်ပေးရကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံသို့ အလုပ်သမား၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးမောင်မြင့်အပါအ၀င် သက်ဆိုင်ရာအရာရှိများသည် မေ ၂၀မှ ၂၅ ရက်ထိ သွားရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 5/27/20133အကြံပြုခြင်း
ဘင်္ဂါလီများ၏ လူဦးရေ ပြန့်ပွားနှုန်းကို ထိန်းချုပ်ရန် ဘူးသီးတောင်နှင့် မောင်တောမြို့နယ်များတွင် ဘင်္ဂါလီ
တစ်မိသားစုလျှင် ကလေးနှစ်ယောက်နှုန်းသာယူရန် ဒေသဆိုင်ရာ အမိန့်ထုတ်ပြန်ထားကြောင်း
“တစ်ပတ်လောက်ရှိသွားပြီ။ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနဲ့ နယ်စပ်ဒေသ လူဝင်မှုစစ်ဆေးရေးနဲ့ ကွပ်ကဲမှုဌာန (နစက)က ထုတ်ပြန်တာ”ဟု ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံ ဦးဝင်းမြိုင်ကပြောသည်။ အဆိုပါ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဘင်္ဂါလီများအနေဖြင့် အသက် (၁၈) နှစ် မပြည့်မီလက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းမပြုရန်၊ ဘင်္ဂါလီအချင်းချင်း လက်ထပ်
ထိမ်းမြားလိုပါက နစက၏ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံရန်၊ မိသားစု တစ်စုလျှင် ကလေးနှစ်ယောက်နှုန်း သာယူရန်၊
ဘင်္ဂါလီအမျိုးသားတစ်ဦးသည် အမျိုးသမီးတစ်ယောက် သာယူရန်တို့ ပါဝင်ကြောင်း ရခိုင်ပြည်နယ်
လူဦးရေစာရင်းကောက်ခံရေး ပြည်နယ်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင် ဦးသန်းထွန်းက ပြောသည်။
“ဒီဥစ္စာရှင်းပါတယ်။ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ဆက်နွှယ်နေတဲ့ ကိစ္စပဲ။ ဒါကိုလုံးဝဆန့်ကျင်တယ်။ နောက်ပြီး
ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော၊ ဘူးသီးတောင်ဒေသတစ်ခုကိုကွက်ပြီး မလုပ်ရဘူးလေ။ လုပ်ချင်ရင် တစ်နိုင်ငံ
အတိုင်းအတာနဲ့ လုပ်။ ဒါကို ကျွန်တော်တို့ပါတီအနေနဲ့ လုံးဝ ကန့်ကွက်တယ်။ လုံးဝလက်မခံ နိုင်ဘူး။
ဒါသက်သက်လူမျိုးတွေအပေါ် တစ်နည်းအားဖြင့် အနိုင်အမင်းစော်ကားခြင်းပဲဗျ”ဟု အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုး
တိုးတက်ရေးပါတီပြောကြားရေး တာဝန်ခံ ကိုစလင်းက ညွှန်ကြားချက်အပေါ်တုံ့ပြန်ပြောသည်။
ထိုသို့ ဘင်္ဂါလီများ၏ လူဦးရေ ထိန်းချုပ်ခြင်းအတွက် အရင်အစိုးရ လက်ထက်၌ လုပ်ဆောင်ခဲ့သော် လည်း
လက်ရှိအချိန်တွင် ပိုမိုထိ ရောက်ရန် တရားဝင် အမိန့်ထုတ် ပြန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဦးသန်းထွန်း က ပြောသည်။
သို့သော် လူဦးရေထိန်းချုပ်မှုကို ပိုမိုထိရောက်ရန် ဘင်္ဂါလီများ နေထိုင်သော နေရာများတွင် အချုပ်အခြာအာဏာ စိုးမိုးမှုရှိအောင် ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ဦးစီးကာ သားဆက်ခြား ကျန်းမာရေးအသိပညာပေးမှုများ ကို ထိထိရောက်ရောက် လုပ်ဆောင်သွားရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဦးသန်းထွန်းက ဆက်လက်ပြောကြားသည်။
ကျောင်းပေးမတက်တော့ဘူး၊ခေါ်ပြီးယောက်ျားပေးစားလိုက် တယ်။ အဓိကပညာရေးပဲ။ အခုလို ပညာမတတ်တာဟာ အရင်အစိုးရမှာ တာဝန်တွေအများကြီးရှိတယ်။ သူတို့ကို ပညာပေးရမယ်” ဟု ရခိုင်ပဋိပက္ခစုံစမ်းရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ဒေါက်တာ ဒေါ်ရင်ရင်နွယ်က VOA မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်နှင့် တွေ့ဆုံခိုက် ပြောကြားထားသည်။ ရခိုင်
ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ဘင်္ဂါလီများအား ပြည်ထောင်စုအဆင့်အနေဖြင့် လူဦးရေ စာရင်းကို ဧပြီ ၂၆ ရက်က ကောက် ခံရာတွင် နှောင့်ယှက်မှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ စာရင်းကောက်ယူမှုကို ရပ်ဆိုင်းထားရသည်။
ဟောဒီလို လမ်းတွေအိမ်တွေမှာ အင်္ဂလန်အလံတွေ လွှင့်ထူ
NLD ၏ ပထမအကြိမ် ဗဟိုဦးစီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး ....
ဒီနေ့ ကျွန်မတို့ တော်ဝင်နှင်းဆီခန်းမမှာ NLD ၏ ပထမအကြိမ်ဗဟို ဦးစီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်... တိုင်း နှင့် ပြည်နယ် ၁၄ ခုမှ ဗဟိုဦးစီးအဖွဲ့ဝင်များမှ လက်ရှိ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ တို့၏ လိုအပ်ချက်များကို ထောက်ပြဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်... ထို့အပြင် NLD ၏ မြို့နယ်များ၏ လိုအပ်ချက်များကိုလဲ သုံးသပ်တင်ပြခဲ့တယ်...
ဒီအစည်းအဝေးမှာ NLD ဥက္ကဌ ၏သုံးသပ်ချက်မှာ...
နိုင်ငံသူ၊ နိုင်ငံသားများ၏ အခြေအနေ ဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာကို သိချင်တာပါ ...
မူးယစ်ဆေးဝါးကိစ္စဟာ သုံးနှစ်အတွင်းပိုဆိုးလာတာကို အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းးးက ထိထိမိမိ မကိုင်တွယ်နိုင်လို့လားးးး။။ လျစ်လျူရှုထားးးတာလားးး ဆိုတာ သိချင်ပါတယ်... ဒါကြောင့်အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းးကို မူးယစ်ဆေးဝါးကိစ္စ ထိထိမိမိ ကိုင်တွယ်နိုင်ဖို့ လိုအပ်ပြီလို့ ပြောပါတယ်...
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံပြင်ရေးးးကို ပြည်သူတွေ မျှော်လင့်နေတယ်ဆိုတာ သိပါတယ်... ဒါကြောင့် မကြာမီထုတ်ပြန်တော့မှာပါ... အဲ့ဒီအတွက် ၂၀၁၅ လွတ်တော်ထဲကိုNLD အမတ်တွေ များများးရောက်ဖို့ ပြည်သူတွေက လုပ်ဆောင်ပေးးရပါမယ်...
NLD ကို ၀င်ရင် ယုံကြည်မှုကို အခြေခံပြီးးး ၀င်ရမှာပါ.. လျှောက်လွာဖိုး ၊ ဓါတ်ပုံဖိုး အလကားပေးပြီးးး ၀င်လို့ လွယ်မှ ၀င်မယ်ဆိုတာ မဖြစ်သင့်ပါ... မလွယ်ကူတဲ့ အဖွဲ့ထဲကို ၀င်မယ်ဆိုရင် အထိုက်အလျှောက်တော့ အရည်အချင်းးးရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်...
ဘယ်ပါတီ ဘယ်အဖွဲ့အစည်းနဲ့မဆို တိုင်းးပြည်အတွက် အကျိုးရှိမယ်ဆိုရင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် သွားးးးမယ်လို့ ပြောကြားးးသွားးးးပါတယ်....
၈၈-ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုကိုကြီး၏ နယူးယောက်တက္ကသ...
ယနေ့ တော်ဝင်နှင်းဆီခန်းမ၌ ကျင်းပသော အမျိုးသားဒီမို...
နိုင်ငံကူးလက်မှတ် သက်တမ်းတိုး တကိုယ်တော် ဆန္ဒ ထုတ်ေ...
ခေတ်နဲ့အညီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု လုပ်ဆောင်သွားဖို့ ဒေ...
နေပြည်တော်တွင် သွေးလွန်တုပ်ကွေး အဖြစ်များ၍ အရေးပေါ်...